एमालेमा भविष्य देखेँ, माओवादी छोडेँ, मैले के बिराएँ? : मेयर कुशवाह « Yo Bela
एमालेमा भविष्य देखेँ, माओवादी छोडेँ, मैले के बिराएँ? : मेयर कुशवाह
‘शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धि ल्याउने नेताको पक्षमा म उभिएको हूँ, सत्ताका लागि जे मन लाग्छ त्यो गर्नु राम्रो होइन, प्रचण्ड सत्ताको खेलमा लाग्नुभयो, ओली देश बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ, त्यसैले ओलीलाई साथ दियौँ’
कुशवाहको पद पनि खारेज गर्न निर्वाचन आयोगमा पत्र पुगेको छ । उहाँले आयोगको निर्णयपछि कानुनी उपचार खोज्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देश बनाउने नेता भएकाले उहाँको पक्षमा आफू उभिएको मेयर ले बताउनुभयो ।
कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गरेका भन्दै उहाँले गठबन्धन टुट्दा जनतालाई धोका भएको बताउनुभयो । लगाम नभएको घोडाजस्तै गरेर प्रचण्ड हिँडेपछि पार्टीमा समस्या देखिएको उहाँको ठहर छ । ‘मान्छेले उचालेकै भरमा, सत्ताकै लोभमा प्रचण्ड कुद्नुभयो र त आज यो दिन आयो,’ मेयर कुशवाह भन्नुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पाँच वर्ष नै सरकार चलाउन दिएर अघि बढेको भए राम्रो हुने कुशवाहले बताउनुभयो । ‘दुई वर्ष बाँकी थियो, ओलीलाई खुरुखुरु काम गर्न दिनुभएको भए हुन्थ्यो, त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइहाल्नुहुन्थ्यो नि तर उहाँले अवसर गुमाउनुभयो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
दुई वर्ष कुर्न नसकेर देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलेर प्रचण्डले गलत गर्नुभएको सियारामले बताउनुभयो ।